नेकपा एमालेको आज पनि बैठक बस्ने, के होला निर्णय ? « Kalakhabar
नेकपा एमालेको आज पनि बैठक बस्ने, के होला निर्णय ?
प्रकाशित मिति : बुधबार, १९ जेष्ठ २०७८ १२:२७
जेष्ठ,१९,कलाखबर–काठमाण्डौं । नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक आज पनि बोलाइएको छ । दिउँसो चार बजे बैठक बोलाइएको स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले बताए । मंगलबार पनि स्थायी कमिटीको बैठक बसेको थियो । बैठकले एमालेको एकता जोगाउन सकेसम्म पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर तत्कालै बैठक बोलाइएको छ । एमालेको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० जेठमा बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल सहित एघार जनालाई निस्कासन गरेका छन् । थप १२ जनालाई त्यसैदिन २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । तर मंगलबारको बैठकले यसबारे कुनै निर्णय गरेन ।
७ जेठमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेता नेपाल समूहका २६ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्दै हस्ताक्षर गरेका एमाले सांसदहरुलाई ओलीले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । २३ मध्ये तीन जना भने आफ्नो निर्णयबाट पछि हटे पछि उनीहरुलाई स्पष्टिकरण सोधिएको छैन ।